Martech Yakagadziridzwa yeMafoni uye Mahwendefa Browsers Martech Zone
Kana iwe wakamboedza kuverenga iyo blog munguva yakapfuura pane mbozhanhare kana piritsi bhurawuza, iwe ungangodaro waive wakanaka kunetseka. Iwe uchave unofara kuziva kuti isu takazogadziridza iyo vhezheni uye tikavandudza chiitiko tichishandisa WPTouch Pro (yakabatana chinongedzo). WPTouch Pro ingangoita mhinduro yakasimba yeWordPress uko iwe kwaunogona kuve izere kutonga pamusoro pesoftware uye piritsi vhezheni.
Heano maitiro edu akatwasuka pane iPhone:
Heano maitiro edu akatwasuka pane iyo iPad:
Tiri zvakare kuenda kunoshanda kumutsiridza edu maapp Parizvino, tine chishandiso cheI iPhone chakanyatso bata uye chinoratidzika kunge chidiki. Tichaendesa mamwe maitiro ekushandisa eApple, Android, iPad uye mahwendefa. Tiri kushandawo paFacebook App!
Tags: simbovereshanduro dzeserurapiritsi shandurowptouch pro
Zvemagariro Zviratidzo Wako Webhusaiti